CAYAARAHA DIBADA | Bakool.net | Page 20
Home / CAYAARAHA DIBADA (page 20)
Jose Mourinho oo laba ciyaaryahan suuqa geynaya January iyo Sanchez oo joogaya!
13/11/2018	Leave a comment
Tababaraha kooxda kubadda cagta ee Manchester United, Jose Mourinho ayaa albaabada u furayo labo difaac oo ka tirsan kooxdiisa, isagoo taas beddelkeeda sii ceshanaya Alex Sanchez. Marka la gaaro suuqa jiilaalka ee bisha January ee soo aaddan, waxaa Mourinho uu qorsheynayaa inuu albaabka ka dejiyo xiddigaha kala ah Eric Baily iyo Marcos Rojo. Labadan xiddig ayaa lumiyay boosaskooda koowaad, waxaana ...
Arsenal oo loollan adag kala kulmeysa saxiixa Juan Mata iyo koox suuqa ku awood badan oo laacibkan doonistiisa kusoo biirtay.
Sida ay ku warramayso Dail Mail, kooxda Arsenal ayaa si aad ah u xiiseyneysa kubbad sameeyaha Manchester United ee Juan Mata. Qandaraaska laacibkan ayaa dhici doono bisha June ee sanadka 2019, waxaana Macallin Unai Emery uu billaabay inuu kala hadlo maamulka Gunners inay dadaal badan geliyaan lasoo saxiixashada laacibka reer Spain. Emery waxa uu doonayaa inuu lasoo saxiixdo kubbad qaabeeyahan ...
Man City oo dariska Man United u awood sheegatay hogaankana dib usoo ceshatay kulan Silva, Aguero iyo Gundogan shabaqada gaareen
11/11/2018	Leave a comment
Kooxda Man City ayaa guul weyn heshay cayaartii adkeyd ee Manchester Derby waxayna 3-1 kaga badiyeen kooxda dariska la ah Man United cayaar qaybta labaad sedex gool la iska dhaliya ayadoo qaybtii hore 1-0 City hogaanka ku heesay. Kooxda Joe Mourinho inta aysan sal dhiganin qaybta hore cayaarta waxaa gool kaga naxsaday David Silva cayaarta oo 12-daqiiqo socoto waxaana caawinaad ka geestay ...
Real Betis oo guul weyn Camp Nou ku gaartay kulan Barcelona isku dhex yaacday!
Kooxda Real Betis ayaa guul caan ah garoonka Camp Nou ku gaartay cayaar ay 4-3 kaga badiyeen naadiga Barcelona oo 10-cayaaryahan ku dhameesatay qaybaha dambe ee kulankan. Cayaaryahan Junior Firpo ayaa hogaanka u dhiibay naadiga Real Betis cayaarta oo 20-daqiiqo socoto waxaana la islahaa Barcelona goolkan lagu kadiyay wey kasoo kaban doontaa. Balse ruug cadaa Joaquin ayaa cayaarta 2-0 ka dhigay daqiiqadii 34-aad ...
Chelsea oo taako kala kulantay Everton cayaar Blues lumisay fursad ay hogaanka si ku meel gaar ah ku qaban kartay
Kooxda Chelsea ayaa awoodi weesay inay dhigeeda Everton ka badiyaan kulan Stamford Bridge ka dhacay oo 0-0 lagu kala tagay. Kullan aad u dhib badan isla markaasna qaladaad badan ay galayaan labada koox ayaa la kala nastay qaybtiisii hore ee ciyaarta. Ciyaartoyda kala ah Yerry Mina, Jorginho iyo N’Golo Kante ayaa dhammaan calaamado hurdi ah ku qaatay qaladaad ay ku ...
Liverpool Oo Guul Ka Gaadhay Kooxda Fulham Oo Anfield Marti Ugu Ahayd, Salah Iyo Shaqiri Oo Reds Guusha Gacanta Usoo Geliyay & Wiilasha Klopp Oo Si Kumeel Gaadh Ah Hoggaanka Ula Wareegay
Kooxda Liverpool ayaa garoonkeeda Anfield Road guul kaga gaadhay kooxda horyaalka ku cusub ee Fulham kulan aad u xiiso badnaa, Guushan ayaa ah mid ay Reds gacanta usoo geliyeen xiddigaha Mohamed Salah iyo Xherdan Shaqiri. Guusha ay Reds maanta ku naaloodeen ayaa ah mid u balanqaadaysa inay ugu yaraan saacado kooban hoggaanka horyaalka Premier League sii hayn doonan iyaga oo ...
Cristiano Ronaldo masoo idleen doonaa habaarka ka heesto inuu San Serio gool ku dhaliyo
Kulanka weyn ee caawo 10:30 habeenimo xiliga geeska Afrika garoonka San Serio ku dhex maraayo AC Milan Vs Juventus wuxuu micno gaar ah u leeyahay Cristiano Ronaldo. Superstar-ka reer Portugal waligiis garoonka San Serio gool kuma uusan dhalinin asigo horey 5-jeer u soo booqday gagidan caanka ah. Ronaldo wuxuu dhaliyay in ka badan 650-gool waayihiisa cayaareed ee quruxda badan balse weli ...
Waa kuwee kooxaha goolasha ugu yar laga dhaliyay Premier League-ga?
10/11/2018	Leave a comment
Tan iyo markii ay soo caga dhigteen horyaalka Premier League-ga goolhayeyaasha ugu qaalisan kubadda cagta, waxaa si aad ah loo tix raacay goolasha laga dhaliyay kooxaha Ingiriiska. Alisson Becker oo Liverpool kusoo biirray iyo Kepa Arrizabalaga oo Chelsea soo caga dhigtay ayaa kooxahooda saameyn wanaagsan ku yeesheen. Halka Ederson Moraes uu isna wax badan ka qabtay shabaqa Manchester City. Goolhayaha ...
Muxuu Jurgen Klopp ka qabaa in Man City lagu ciqaabi waayo jebinta sharciga Dhaqaale Wanaagga?
Tababaraha kooxda Liverpool ee Jurgen Klopp ayaa ugu baaqay xiriirka kubadda cagta qaaradda Europe ee UEFA loo soo gaabiyo inay Manchester City ku qaadaan ciqaabta jebinta sharciga dhaqaale wanaagga. Macallin Klopp ayaa hadalkan uu kasoo baxay, ka dib markii warsidaha Germany kasoo baxa ee der Speigel uu soo saarray dambiyo ay Man City kugula tagrifashay sharciga dhaqaale wanaagga (Financial Fair ...
Alexis Sanchez ma uusan ahayn dookha koowaad ee Jose Mourinho! Kumuu ahaa?
Kooxda Manchester United ayaa Alexis Sanchez kasoo qaadatay kooxda Arsenal ka dib markii ay si kala beddelasho ah isu dhaafsadeen isaga iyo Henrik Mkhitaryan. Balse xaqiiqooyin ayaa tilmaamaya in Jose Mourinho bartlimaameedkiisa koowaad uusan ahayn weeraryahanka uu hadda heysto ee Sanchez, hase ahaatee uu doorbidayay laacibka kooxda Inter Milan ee Ivan Perisic. Si kastaba ha haatee, Xiddigga reer Chile ayay ...